Myagdi News - नेता अधिकारीको अर्थमन्त्रीमाथि आक्रोश : गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तपाईले बनाउनु भएको हो ? - Myagdi News
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि खनिनुभएको छ । विनियोजन विधेयकको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सुझाव दिन संसदको रोस्टममा उभिएका अधिकारीले अर्थमन्त्रीले गठबन्धनको नाममा मनलाग्दी गरेको र अर्थ नीति तथा संरचनाहरु नै ध्वस्त पार्न लागि परेको आरोप लगाउनुभयो ।
‘तपाई आफै अर्थतन्त्रको नीति, संरचना संवैधानिक निकायहरुको सम्बन्धहरु भत्काउन उद्दत हुनुहुन्छ भने कसरी आर्थिक सुशासन हुनसक्छ ?’ गभर्नरमाथिको कारबाही घटना कोट्याउँदै नेता अधिकारीले भन्नुभयो, ‘गलत नियतबस गभर्नरमाथि कारबाही गर्ने र न्यायिक प्राणालीमार्फत पुनः फर्किएपछि नैतिकताका हिसाबले राजीनामा दिनुपर्दैन ?’ यतिमै रोकिएनन् उहाँले यस्तो गैर जिम्मेवार व्यक्तिबाट मुलुकले कस्तो आर्थिक सुधारको अपेक्षा गर्ने ? भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
सोही अवसरमा अधिकारीले अहिलेको सरकारले नै सबै विकास निर्माण गरेको जसरी प्रस्तुत भएको भन्दै सो व्यवहार सुर्धान अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो । ‘के गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तपाईले बनाउनु भएको हो रु मेलम्ची तपाईले ल्याउनु भएको हो ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सरकारको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि तिखो टिप्पणी गरेका अधिकारीले हात पाउ केही पनि नभएको बर्माले सृष्टी गरेको कुरुप प्राणी जस्तै भएको जिकिर गर्नुभयो । यसको समाधानका लागि सरकारले राजनीतिक निरुपणका साथ सर्वसम्मतिमा जानुपर्ने बताउनुभयो । रातोपाटीबाट